အမေရိကန်မှာဆေးစထိုးပြီ၊ မြန်မာနိုင်ငံရော ဘယ်တော့စထိုးမလဲ – Myanmar
အမေရိကန်မှာဆေးစထိုးပြီ၊ မြန်မာနိုင်ငံရော ဘယ်တော့စထိုးမလဲ
December 14, 2020 admin Health, Knowledge 0
အမေရိကန်မှာဆေးစထိုးပြီ၊ ထုံးစံအတိုင်း အရေးပေါ်ဋ္ဌာနကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ ဘိုးဘွားပြုစုသူတွေ၊ ကိုဗစ်ကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တွေ အယင်ထိုးရမယ်။ နောက် နှစ်ပါတ်လောက်မှ တခြားဆရာဝန်တွေထိုးရမှာ။
ပြဿနာက အမေရိကန်က Pfizer ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး သန်းတရာ ပဲ အော်ဒါ မှာထားတယ်၊ သူ့လူဦးရေရဲ့ သုံးပုံတပုံ။ အခုဆေး တကယ်ထွက်လာတော့ နိုင်ငံ့လူဦးရေ နဲ့ မလောက်တော့ဘူး။ ရွာလည်ရော။
ကမ္ဘာမှာ ၃၁ နိုင်ငံက ဆေးကို အမေရိကန်နိုင်ငံ ထက်ပိုမှာထားတယ်၊ ဒီတော့ အခုမှ မှာလို့ကတော့ ပထမရထားတဲ့ ဆေး သန်းတရာရပြီးရင် တခြားနိုင်ငံ ၃၁ နိုင်ငံ ဆက်ပေးရမယ်။ မှာလည်း အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေပြီးအောင်စောင့်ပေတော့ဆိုရင် ဆင်းခါနီးဆဲဆဲ ထရန့်ကြီး နိုင်ငံရေးသေပြီ။
ဒါကြောင့် အမေရိကန်ဆေးကုမ္ပဏီတွေဟာ အမေရိကန်လူမျိုးကို ကာကွယ်ဆေးရောင်းပြီးမှသာ တခြားနိုင်ငံတွေကို ရောင်းရမယ် လို့ သမ္မတ က အရေးပေါ်အမိန့်ထုတ်တယ်။ ထရန့်ကတော့ သူ့နိုင်ငံမှသူ… အမေရိကန်လုပ်ပုံနဲ့ ဆေးကုမ္ပဏီတွေ ခဗျာ ဖေါက်သည်မျက်နှာပျက်ရတော့မယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဆေးပြဿနာတက်နေကြလေရဲ့။
ပထမပြဿနာက Pfizer ကလည်း ဒီနှစ်ထဲမှာ ထင်ထားတာရဲ့တဝက်ပဲထုတ်နိုင်မယ်တဲ့၊ ကုန်ကြမ်းက မှာထားသလောက် မပို့နိုင်ကြဘူးတဲ့။ Pfizer က ဒီဇင်္ဘာမှာ ဆေးသန်း၅၀ ထုတ်မယ်၊ ၂၀၂၁ မှာ ဆေး သန်း ၁၃၀၀ ထုတ်မယ်တဲ့၊ ကမ္ဘာမှာလူဦးရေ သန်း ၇၈၀၀ ရှိတယ်။ သန်း ၆၄၅၀ က တခြားဆေးသာမျှော်တော့။ ကမ္ဘာမှာတော့ လောလောဆယ် Pfizer ဆေးကိုပဲ ယုံကြသေးတယ်။
ဒုတိယပြဿနာက ဆေးထုတ်တဲ့ စက်ရုံရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကို ခွဲပေးရမယ်၊ ဥပမာ Pfizer က ဘယ်လဂျီယံမှာ ဆေးထုတ်တာ မနိုင်လို့ အိန္ဒိယမှာ ဆေးလာထုတ်ရင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကြေနပ်အောင် ဆေးရောင်းပေးရမယ်။
First come first serve ပဲ။ capitalism ဆိုတာ ချမ်းသာသူ ဥာဏ်ကောင်းသူ နိုင်သူစား စတမ်း။ ပထမ ဆေးဝယ်တဲ့ သူဌေးနိုင်ငံတွေ၊ ဒုတိယ ဆေးထုတ်တဲ့ အလုပ်သမား နိုင်ငံတွေ ပေါ့။ သူတို့ကျော်ခွပြီး ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကို မလာနိုင်သေးပါဘူး။ စစ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ ဆင်းရဲနိုင်ငံတွေ စိတ်ကြေနပ်သွားအောင် တသန်းနှစ်သန်းတော့ ရောင်းပေးကြမှာပါ။
မင်းတို့နိုင်ငံမှာ -70 ဒီဂရီ အခြေခံအဆောက်အအုံမရှိဘူး၊ ဆေးပေးလို့မရဘူး ပျက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဘာဘူး ညာဘူး ပြောပြီး သူတို့အချင်းချင်းအယင်ခွဲကြပါလိမ့်မယ်။
ရုရှဆေး Sputnik V vaccine တော်တော်ကောင်းတယ်ပြောတယ်၊ အော်ဒါတက်တာတောင် တဘီလီယံ ရှိပြီတဲ့။ အင်္ဂလန်က Oxford AstraZeneca ကာကွယ်ဆေး က ဆေးပိုထွက်အောင် ရုရှရဲ့ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပေါင်းထုတ်မယ်ပြောတယ်။
တရုတ်ဆေးလည်း အလုပ်ဖြစ်မှာပါ။ အော်ဒါမှာထားလားမသိဘူး။ တရုတ်ကတော့ သူ့နိုင်ငံသားတွေအကူးခံရမှာစိုးတော့ အိမ်နီးချင်းတွေနဲနဲဝေမှာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ကိုဆေးရောင်းပေးပါလို့ WHO ကတဆင့် အဖွဲ့ဝင်ထားတဲ့ Covex အဖွဲ့ မှာ နိုင်ငံ ၁၈၀ ကျော်ပါတယ်။ ၂၀၂၁ မကုန်ခင် ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက် ဆေး တဘီလီယံ ရဖို့ကြိုးစားမယ်လို့ WHO ကပြောတယ်။
ဒီတော့ နောက် ၁၂ လအတွင်း မြန်မာပြည်ထဲက လူ၁၀ ယောက် မှာ တယောက် လက်မောင်းမှာ အပ်လာစိုက်ဖို့ မသေချာသေးပါဘူး။
ဒီကြားထဲ ဆေးများများထွက်လာဖို့၊ ကာကွယ်ဆေး အပြင် ကုသဆေးပါ ရှာတွေ့ဖို့၊ နိုင်ငံကြီးတွေ ဆေးနဲနဲထိုးပြီးတာနဲ့ ရောဂါပျောက်ကုန်ကြဖို့ ဆုတောင်းကြပါ။
ကျွန်တော်တို့ အနည်းဆုံး နောက် ၆လ ကိုဗစ်နဲ့ လုံးထွေးနေရဦးမယ်။ ကဲ ကပ်ရောဂါပဲ မထူးပါဘူး လု့ကံ ဝ ကံပေါ့ ဆိပြီး ဒီအတိုင်းဆက်သွားမလား? သေနတ်နဲ့ချိန်ပြီး လုံးဝ မထွက်ကြနဲ့ လို့ အိမ်ထဲ နှစ်ပါတ် နေခိုင်းတာကောင်းမလား? ဘယ်လောက်ကူးနေပြီလဲ? ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ? အစိုးရလည်း စဉ်းစားရကြပ်မှာပေါ့။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ၈ လရှိပြီဆိုတော့ လွန်တာတော့ လွန်ကုန်ပါပြီ။ ပြောချင်တာက မြန်မာပြည်ထဲ ဆေးရောက်လာဖို့ မလွယ်သေးဘူး ဆိုတာရယ်… Mask တပ်ဖို့၊ လူစုလူဝေးရှောင်ဖို့နဲ့ ကာလကြာရှည်စွာ ကိုဗစ်နဲ့ယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားဖို့ပါပဲ။
@Kyaw Swa Min
ပြည်တွင်းလေကြောင်းခရီးစဉ်များတွင် လေယာဉ်စီး ခရီးသည်များ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်